Special Jo Nesbø. Ya na onye kere Harry Hole na Madrid. Akara | Akwụkwọ ndị dị ugbu a
Mariola Diaz-Cano Arevalo | | Ajụjụ ọnụ, Ndị edemede, Ihe omume, Akwụkwọ, Noticias, Black akwụkwọ
Foto nke (c) Mariola Díaz-Cano na (c) Getafe Negro
Jo Nesbø bụ ụbọchị ndị a na Getafe Nwa, na ya XII mbipụta nke mechiri emechi ụnyaahụ na nke ahụ enweela dịka mba ọbịa Norway. Onye ama ama ama ama akwụkwọ akụkọ ojii, nna Commissioner Harry oghere, keere òkè n'ọtụtụ ọrụ na Daysbọchị 3 na ogbako ogbako gunyere iji chee Mma, akwụkwọ ọhụrụ ya, na nzukọ ole na ole ya na ndị na-agụ ya. Ihe a pụrụ iche bụ nke m akwụkwọ akụkọ ihe mere eme n'oge dum na nke m nkọwa ndị ọzọ banyere ya, na-enweghị obi abụọ otu n'ime ndị kasị arụsị m dere. Echefula ya.
1 23/10/2019 - Jo Nesbø ya na Lorenzo Silva (Mutua Madrileña Foundation)
1.1 Ọdachi na mmeri, Mark Twain, nkà ihe ọmụma, psychopaths na "ee, m mgbe ewere ihe dee."
1.2 Ajuju na azịza
2 24/10/2019 - Pịa ogbako na okwu na Espacio Mercado (Getafe)
3 25/10/2019 - Nzukọ na Pedro Salinas Library
3.1 Oge na-atọ ọchị - Ihe omume nke Harry Hole
3.2 More edebanye aha na nchịkọta akụkọ scoop na akwụkwọ Nesbọ ọzọ
4 25/10/2019 - Nzukọ na ndị na-agụ akwụkwọ na ịbanye na Casa del Libro
5 Echiche m banyere Jo Nesbø - charisma nke ịdị mfe
23/10/2019 - Jo Nesbø ya na Lorenzo Silva (Mutua Madrileña Foundation)
Ọdachi na mmeri, Mark Twain, nkà ihe ọmụma, psychopaths na "ee, m mgbe ewere ihe dee."
Na igwe mmadu ụlọ nzukọ nke Mutua Madrileña Foundation mkparịta ụka a mere n'etiti Nesbø na Silva banyere ọnọdụ ụmụ mmadụ na akwụkwọ mpụ. Otu awa na nkeji iri na ise ị nwere ike ịhụ ebe a ma tinye azịza nye ajụjụ ọhaneze. O doro anya na ha kparịtara banyere ego kachasị ọhụrụ nke usoro Harry Hole ha, Mma, kamakwa banyere oge gboo ọdachi nke ahụ dị na ya niile.
Nke ahụ bụ ma eleghị anya oge kachasị mkpa ma ọ bụ dị oke njọ nke Nesbọ nrurita ụka ya na onye nhazi di uku dika Lorenzo Silva na mmetụta nke okpukpe na omume ọma n'etiti ọha mmadụ taa. Na ha tinye ngwoolu na ike nke ume na ahụmịhe na-adịghị mma (mmeri na ejije) nke a na-enwekarị mmeri karịa ndị ziri ezi (mmeri na obi ụtọ) n'ihi na nghọta banyere nke ikpeazu bu - ma obu ka odi- mkpumkpu.
Asụsụ ahụ bụ nke pụtara ihe bụ isi nke agwa ya na akụkọ ifo ya, nke nwere ugbua na egwu maka njedebe nke onye uwe ojii ya merụrụ ahụ nwere ike ọ gaghị aka nká (na nkeji ọhụrụ a Harry Hole nwere mmasị na 50). Na maka okike ahụ kwesịkwara iguzosi ike n'ụkpụrụ ya na enweghi mmetụta site ihe ha chere ma ọ bụ nwere ike ịjụ ndị na-agụ akwụkwọ gị.
Nkwupụta na egwuregwu zuru oke - Nordic, mana egwuregwu-gara ajụjụ Silva gini ka ndi dere ede nke scinainavia nwere n'ozuzu maka ihe ịga nke ọma ha rụzuru. N'ebe ahụ Nesbø ji a kpọrọ ụda zaghachi na ha niile na-ezute otu ugboro n'afọ ka mee atụmatụ mmeri nke ụwa.
Ajuju ndi ozo bu gbasara ọgụgụ gị, nke dị n'ụdị dị iche iche, ma ugbu a lekwasịrị anya karị nkà ihe ọmụma n'ihi na nwa ya nwanyị na-agụ ya (ọ so ya bịa Madrid mana ọ nọghị ebe ahụ). Ma ọ bụ ndị na-emetụta ya n'oge ọ bụ nwata, bụ ndị nke Mark Twain - Tom Sawyer na ahụmahụ nke Huckleberry finn-.
Otu ihe ọ wasụ bụ ma ọ bụrụ na ọ bụla nwere ihe dee. Ọ zara ee, n'agbanyeghị na o kwughị ihe ọ bụla, na ọ malitere ide iji hụ ka ọ dị, na kwa n'ụtụtụ echi wee pụta bụ a ezigbo nsị. Onye ozo di nma ya ogbughari na-egbu oge na nkenke "ee" ma ọ bụrụ na ihe ọma ga-eme Harry mgbe ụfọdụ. Na onye ozo banyere ya echiche banyere okpu mbipute cinematographic nke Onye Snowman.
Okwu ahụ kwụsịrị na azịza ikpeazụ maka ee ọzọ nwere ihe nke psychopath, nke ahụ kwa ọ bụ "ee" ọ bụ ezie na iru eru na e nwere ndị ọzọ ọrụ ọtụtụ ihe ndị ọzọ ewekarị ka psychopathies.
Omume ahụ mechara nwee obi uto mgbe ahu enwere obere mbinye aka na ụfọdụ ndị na-agụ akwụkwọ ndị na-ebu ma ọ bụ nwee akwụkwọ. Na ọ bụrụ na ị ga-etinye ya mana ọ bụ kpọmkwem oge ahụ. Ma eleghị anya, ọha ma ọ bụ ọ dị ka ọ gafeela nke Lorenzo Silva dere ma ọ bụ na ọ maghị nke ọma gbasara Nesbọ. Ka anyị kwuo na nkezi afọ na anya m dị ka onye na-agụ ụdị a na onye edemede a agbakwunyeghị ọtụtụ.
Ma ọ bụ, ka anyị si ghara ịtụ anya mbinye aka ahụ (nke Silva kwupụtara ma rịọ ka ọ ghara ịdị ogologo, mana Nesbø kwuru na ya enweghị nsogbu na ọ ga-ewere foto), kwụ n'ahịrị na e guzobere Ọ bụghị kpọmkwem maka ya, mana maka weghachite ekweisi maka ntụgharị asụsụ nke otu oge. N'ihi ya, e nwere enweghị oge, ma na ndị kacha nwee mmasị n’ike nwere ike iji ohere ahụ kelee ya ma soro ya nọrọ.
24/10/2019 - Pịa ogbako na okwu na Espacio Mercado (Getafe)
Ọ bụ ihe ihere na enweghị ike ịga nzukọ n'onwe m, mana o nyeghị m oge m nwere ihe onwunwe. Tụtụ echi Nesbø na-enye a pịa ogbako na Iberostar De Las Letras nkwari akụ, nke a na-akọ n'ọtụtụ ebe na mgbasa ozi. N'ehihie ọ sonye na a okpokoro okirikiri banyere Nordic News abanyela na Getafe Market Space, ọzọ ya na Lorenzo Silva na onye obodo ya Aha ya bụ Ruth Lillegraven (edemede nke Na miri fjord) na Icelandic Ragnar Jonasson (Onyunyo egwu).
25/10/2019 - Nzukọ na Pedro Salinas Library
Ugbua na ụtụtụ Fraịde Jo Nesbø gara nzukọ na ndị na-agụ akwụkwọ na "Pedro Salinas" Center Ọbá akwụkwọ Ọha Gịnị ka onye dere akwụkwọ ahụ kwuru? Anamaria Trillo. Enwekwara onye nchịkọta akụkọ nke Akwụkwọ Akwụkwọ na isi nke akwụkwọ akụkọ na nkwukọrịta nke donlọ Ramdon, na mgbakwunye nchịkọta omenala site na ụlọ ọrụ nnọchite obodo ma ọ bụ, nke bụkwa onye nsụgharị nke Mma.
Ọ bụ na a gburugburu ebe obibi otutu nke kacha nso, ọ bụ ezie na ọ dịkwa obere oge. Ma, e jiri ya rụọ ọrụ nke ọma karịsịa na gburugburu ajụjụ na azịza nye onye edemede ahụ, na ọzọ banyere ya akara aka nke Harry Hole. Ọzọkwa banyere aha ya kachasị amasị usoro, nke bụ Robin, maka ịkọ ahụmahụ nke ezinụlọ ya, ọkachasị nna ya.
Oge na-atọ ọchị - Ihe omume nke Harry Hole
Enwere ụfọdụ, dị ka mgbe o biliri na igbe nke chọkọletị na ọ nwere na tebụl ma chọọ ịkọrọ ha onye ọ bụla. Ma obu azịza di na nwunye na ajuju banyere ihe nkiri.
Ma ọ bụ na onye inyeaka kwuru na ọ nweghị mmasị na ihe ọ bụla ma ọ bụ n'ihi mmegharị ma ọ bụ n'ihi adịghị ka ọ dị nke onye na-eme ihe nkiri Michael Fassbender dị ka a Harry na ndị niile na-agụ akwụkwọ gị maara na ọ na-atụ ihe 1,94, ọ bụ onye nkwọcha ntutu ọ fọrọ nke nta ka ọ daba mgbe niile Doc Martens. Ya mere - o kwuru njakịrị - ọ dịkarịa ala, ha nwere ike etinyela akpụkpọ ụkwụ ndị ahụ. Nesbø chịrị ọchị na, ọzọ na Nordic sarcasm, zara ya ajụjụ (ka mma ịghọta ihe nzuzu) Ọ bụghị na ha tinyere akpụkpọ ụkwụ ma ọ bụ ọ bụ ezie na o toro ọrụ Fassbender na onye ọ bụla n’ozuzu ya.
Ọ bụ ebe ahụ mgbe m banyere, que Enwere m ogologo oge a nwa akwukwo nke m, pụrụ iche na-enweghị ike ịfefe, ya bụ, dị ka onyinyo Harry maka onye ọ bụla na-agụ ya. Nke m bụ nke onye omeewu ama ama n’ala ndị ahụ, Trond Espen Seim, data achọtara m mejor Viking / Anglo-Saxon kwuputara na Maazị Nesbø nwere ike ịkọwa na njedebe. "Ah, ee, onye na-eme ihe nkiri Norwegian, ee, ee ...". Ihe ijuanya, karịsịa maka m bụ na ọ nọgidere na-agụta ihe anecdote nke mere ka m ruo Valhalla kachasị amasị m:
"Ọ bụrụ eziokwu, a gbanwere aha ya, ma tupu ọrụ ahụ. Ọ bụ nwoke toro ogologo (ihe dịka 1,90 ma ugbu a agbanweela 48 Ọktọba) na, mma, ọ dịkwa nnọọ mma. Ọzọkwa aha m bụ otu ụbọchị n'ihi anyi nweru enyi. Anọ m n'ebe ụfọdụ ọha, dị nnọọ mma site na ihe m nụrụ n'azụ, na ọ gwara m na ọ gụrụ m ma chọọ ịbụ Harry Hole. Agwara m ya dịkwa mma, mana gịnị ọ bụrụ na o doro anya na ọ ga-a enoughụ ihe ọ enoughụ enoughụ ma ọ bụ karịa dị ka Harry. Mgbe ahụ ọ zara m: «Ọfọn, amaghị m, mana site na Chukwu Ana m anwa"".
More edebanye aha na nchịkọta akụkọ scoop na akwụkwọ Nesbọ ọzọ
Ihe omume a mechara site na ekele na ntinye aka ndi ozo. Otu wetala akwụkwọ iri na abụọ ya site n'usoro nke Nesbø jiri nwayọ binye aka.
Anọ m na-agwa James Bonfill, onye zara m olee mgbe a ga-ebipụta ha efu efu Nesbø: Ọbara na snow (Ọbara na snow) na Anyanwụ etiti abalị (N'etiti abalị Sun), nke dị n'asụsụ ndị ọzọ ruo ogologo oge. Na m agụworị ha, ha dị mkpụmkpụ ma, ọ bụ ezie na site na akụkọ onwe ha na usoro Oghere, ha dịkwa magburu onwe, na mgbe uche m dị umeala.
Nakwa, mbụ ezubere maka mmiri 2020 na nke abụọ na ọgwụgwụ nke afọ ahụ. Yabụ ka anyị na-echere oge ọzọ Harry ga-akwụ ụgwọ, anyị ga-aga n’ihu inwe ezigbo akwụkwọ Nesbø.
25/10/2019 - Nzukọ na ndị na-agụ akwụkwọ na ịbanye na Casa del Libro
Ndi omume kacha nso. Na ndị mmeri ise, si na Spen niile, nke ọgụgụ marathon a na-akpọ otu izu gara aga site na onye nkwusa. Na di na nwunye nke Ntọala na Jo Nesbø (M na-agụ onwe m maka ịbụ onye kere ya, ọfụma) a ga-akpọ m.
tụgharịa a nọrọ jụụ nzukọ na muy cómodo. Site n'olu, ajụjụ na nkọwa, na karịsịa site na ụzọ kwụ ọtọ nke Nesbø zara ihe niile.
Site na nkọwa ya gịnị mere ụfọdụ gootu na Mma, gịnị ka anyị na-aza ekpugheghị ha ma ọlị n’ihi na ụfọdụ arụchabeghị ya. Ya ikwughachi na ekwenyeghi na echiche ndị ahụ, aro ma ọ bụ nkwanye ugwu nke ndị na - agụ akwụkwọ gị tupu akara aka na agwa a ma ọ bụ nke ọzọ. Ya mesiri ike na nke ahụ ebe usoro okike Kedu ihe ọ pụtara ịkpọrọ gị na nke ahụ ọnọdụ que ma eleghị anya ị chere ma ọ bụ, ma na-enweghị mgbe ị hụrụ. Ma ọ bụ kama, na ị na-adọ aka ná ntị nhazi kamakwa mgbe niile buru pụọ ma daa n’ime ya.
Maka ihe niile, mgbe ị na-achọpụta ebe ndị ahụ, ha na-eju gị anya dịka ị ghọtara ha Ma zere ikwu, "Oh ee, ọ bụ eziokwu." Na arụkwaghịm na nnabata, kamakwa na mmetụta uche nke anụwo ụtọ ka mma ma ọ bụ ka njọ.
Anyị na ya nwere ike ịkparịta ụka ọ jụrụ anyị ebe anyị si ma kwuo otú o si echetakarị data si otú ahụ na-enyere onwe ya aka nke football, ọmụmaatụ. Ah, nke a sitere na saịtị dị otú a, ebe ị nwere ike ịbụ onye na-eso ụzọ otu dị otú a ... Ka anyị cheta na ọ bụ jugador ọkachamara na ya uto ruo mgbe akwara Afọ 19.
Otu ajụjụ m jụrụ bụ ee egwu ọ na-ege ma ọ bụ na-amasị (ejije, mejupụtara ma bụrụ abụ na otu ya Kwuo derre) ọ bụkwa nke Harry. Ọ zara na ee ha na-eketa oke, n’agbanyeghi na o wutere ya na Harry amasi ndi agha ya. Ma wee dị nwayọ na a "Agaghị m ege gị ntị" mgbe ole Anyị na-arịọ gị ka ị banye na nke ọzọ Harry n'ihi na ọ nweghị ike ịhapụ anyị na njedebe nke Mma.
Ọ gwụchara mgbe mbinye aka na foto anyị niile ndị nọ n’ebe ahụ, ọ bụ ezie na ọ dị obere ọha, eziokwu. Casa del Libro na Gran Vía bụ ụlọ ahịa flagship na Madrid, ma saịtị a kara aka ka omume ndị a na, nke kachasị, ọ bụ mgbe ọ nọ n'etiti ndị otu Nesbø, ọ bụghị nke kacha lucid. Na mgbakwunye na obere ọha ahụ enwere. Oge ahụ abụghịkwa oge kwesịrị ekwesị, ma burukwa Maazị Nesbø bụ gbagwojuru anya. Yabụ akwụ ụgwọ ahụ bụ ịdị nso ahụ okomoko ya na ya.
Echiche m banyere Jo Nesbø - charisma nke ịdị mfe
Ha na-ekwu na na obere ụzọ bụ ebe ị nwere ike mma karịa ndị mmadụ. Ma nke ahụ ikwesighi ịtụkwasị obi anya. Ọ bụ ya. Ke idaha enye emi, nte ededi, ihe ọzọ onwe. Na akọwapụta kpọmkwem ugbua: nkem.
Naghị abịaru Jo Nesbø na akwụkwọ akụkọ ya mgbe ị dị afọ iri abụọ. Ma ọ bụ otu ihe ahụ na 30. Emezuola m afọ ojuju dị iche iche 40 mgbe m chọpụtara. Ga-enwe a malitegharịa dị ka a na-agụ na izugbe na mpụ akwụkwọ akpan akpan. N'ihi na ị ga-enwe ọtụtụ gasket, guts, irighiri akwara nke nchara na epic ntachi obi iguzo n’ihu, ọ bụ ezie n’ụzọ ihe atụ, nke anụmanụ ide ihe dị ka Harry oghere.
Ma nke ahụ bụ Harry dị adị ma bụrụkwa enyi anyị, ọ dịghị ihe akwadoro, ee. Nesbø ekwuola ya ọtụtụ oge: "Ọ bụ otu n'ime ndị ọrụ ibe gị nke ị na-apụ na ngwụsị izu mana ị naghị akpọ ha ọzọ na Mọnde." Ọ bụ ya mere anyị ji eche na anyị hụrụ ya n’anya, na-enwere ya ọmịiko ma na-emekwu ebere.
Ọtụtụ ihe hapụrụ nakwukwu mmiri ịgwa, kama ịjụ, Nesbọ. Otu bụ ma ọ bụrụ na ị maara nke ahụ, ọ bụghị ugbu a mgbe ị gụsịrị Mma mana ogologo oge tupu ugbu a, ihe o kere eke agafeela ya. N'ihi na ọ nwere. Maka ike nke mmasị, mmasị na ahụ riri ahụ. N'ihi ihe ndị anyị na-eche na ọ na-ahapụ anyị oge ọ bụla anyị gụrụ akụkọ ọzọ dị egwu dịka ọ bụ ihe ọmụmụ na ndụ ya, ọ bụ ezigbo akụkọ ma bụrụ ezigbo. OKedu ka o si eme? mgbe ụfọdụ, n'ihi na n'ebe ahụ ọtụtụ ndị na-agụ akwụkwọ que ha na-amata ya dị ka Harry. Na enwetara m ya. N'ihi gịnị?
Maka Ọ dị mfe inye Harry ịdị mfe nke onye okike ya. Ọ bụ kpọmkwem nke na-enye charisma na iri puku ha abuo. Ma n'otu oge ahụ, na e nwere anwansi, kee ya nakwa a otu ihe ajuju.
Harry bụ ihe okike zuru oke nke ezughị okè mmadụ, nwere envelopu anụ ahụ ọ bụrụgodị na ọ bụ akwụkwọ. O wee pụta na nke ezigbo Nesbø dị ezigbo iche: na-emebi emebi na ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ onye na-enweghị enyemaka, dị ka a ga - asị na ọ nwere ike ịgbaji n'oge ọ bụla na mbọ ọ bụla ma ọ bụ mmegharị na mberede. Ma ọ na-esokwa ya ihere na ihereKedu ihe ị chọrọ igosipụta? oyi ma ihe na-ebunye ima mgbe inwere ya ole na ole sentimita asatọ. Dị nnọọ ka ọ na-eme ụda olu dị ala ma dịkwa nwayọọ nke olu ahụ nke ụda n'ime asụsụ nke akụkụ ndị ahụ.
Ya niile yiri ka a nke ebumnuche iji gbalịa ka a hụ ya. Ma nweta ihe megidere ya: jide gị maka ịdị mfe ahụ ọ na-agbanwe n'ime nkà na ike na-enweghị atụ imepụta eluigwe na ala, akụkọ na ihe odide pụrụ iche. Onye chepụtara echepụta dịka Harry Hole nwere ike isi na uche pụta dịka Jo Nesbø. Nke ahụ bụ, onweghi onye ma e wezụga Jo Nesbø nwere ike chepụta ya. Ma abụghịkwa onye ara dọkịta proctor, ma ọ bụ onye ọbọ onye nketa dị ka Sonny Loftus na ndị ọzọ ihunanya antiheroes dị ka Olav (Ọbara na snow) ma ọ bụ Jon (N'etiti abalị Sun). Ma ọ bụ n'ezie mee nke ihe omimi dika Macbeth.
Ime anwansi na mmezu bụ ime ya, tụmadụ na ọdachi ahụ etiri, ma akabeghị mmeri, onye uwe ojii na-egbu egbu, ka tụọ ọtụtụ ndị na-agụ akwụkwọ n'anya nke uwa nile. Ọ bụrụ na ha akụkọ zuru ụwa ọnụ na anyi nile na-amata ma na-ekerịta, mana ị ga-amata etu esi agụta ha. Ma ọ bụ ị ga-agwa ha ụzọ o si mee. Na anya dị jụụ na nke ahụ fragility aghụghọ aru.
Maka ihe niile na eluigwe na ala Nesbø bụ na-adọrọ mmasị si umeala n'obi ezi ọrụ. N'ezie, ka anyị hụ ma ọ ga - ejikwa ike mee ya otu ụbọchị yana ndị enyi abụọ ahụ ọ sịrị na ya nwere na ya enwebeghị ike ịbanye.
Achọrọ m Nye ekele Black Getafe, kọmishọna gị Lawrence Silva na ndị njikwa nke RRSS, ka Akwụkwọ mmiri, nchịkọta akụkọ ya, Jaume Bonfill, na otu ndị marketing na nkwukọrịta nke Rlọ Random (Otu puku ekele mgbe niile Eva Cuenca). Na n'ezie ọrụ ntụgharị, yana ndị ọrụ Oflọ akwụkwọ. Maka nke ya anya, obiọma na otu ha si dị mfe iji mee ihe niile iji zute Maazị Nesbọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Akwụkwọ » Ndị edemede » Jo NesbÃ¸ pụrụ iche. Ya na onye okike Harry Hole na Madrid. Mmetụta
Akwụkwọ akụkọ zuru oke nke jikọtara akụkụ niile nke nzukọ na akụkụ ahụ dị oke mkpa, nke bụ mmetụta na mmetụta nke Maazị Nesbọ hapụrụ.
Enwere m mmasị na nkọwa ahụ nke "esemokwu na-adịghị mma" iji zoo aka na anụmanụ ahụ nke akwụkwọ ozi bụ arụsị anyị.
Inwe ikike imepụta Harry (ọkachasị isoro ya biri ọtụtụ afọ) na-egosi ike ime karịrị nke mmadụ, eee sir ...
Daalụ Mariola, maka ime ka anyị sonye ntakịrị na nke ọ bụla n'ime oge ndị Getafe Negro na onye nkụzi ukwu nọ.
Dị ka ị na-ekwu, ị gaghị eru 20, ma ọ bụ 30 ... mana mgbe ị rutere ebe ahụ ị nweghị ike ịhapụ.
Maka m, maka inwe mmetụta nke ahụ, maka ịkekọrịta mkpụrụ obi Harry Hole na ịnụ ụtọ gị na ehihe a na-agaghị echefu echefu, ọ ga-abụ otu n'ime ihe pụtara ìhè na ndụ m.
Ugh, Arantxa, na mmetụta nke m maka okwu gị. Site na mmụọ nke ụbọchị ndị a na m maara onwe m nke ọma, enwere m ike ịgwa gị na enwere oge dịka ndị a na-eme ka ndụ a baa uru, ka anyị kwuo kama ọ bụ nwanyị nke bụ izugbe. Na mgbe afọ jọrọ njọ nke kachasị m nọrọ, mmetụta uche ndị a kachasị mma. Ya mere, enwere m obi ụtọ na oge a anyị dabara na ịkekọrịta. Olileanya na e nwere ndị ọzọ. Daalụ.
Akwụkwọ akụkọ zuru oke. Ọ bụwo ihe obi ụtọ dị ukwuu ịgụ gị ma nwee ike isonye, ​​site n’ebe dị anya, n’ọgbakọ a magburu onwe ya. ♥ Daalụ otu ijeri. 😘
William Shakespeare na-ime ejije
Alfonsina Storni, akara ngosi nke Argentine postmodernism. 3 poems